ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြုချဉ်းကပ်ခြင်း သုတေသနစာတမ်း အမှတ် (၄) | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြုချဉ်းကပ်ခြင်း သုတေသနစာတမ်း အမှတ် (၄)
(ဒုတိယအကြိမ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းများနှင့်အဆိုများ လေ့လာချက်)
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ( ၁၇.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇ ) ထိ
သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ( ၁၅. ၁. ၂၀၁၈ မှ ၂၉. ၃. ၂၀၁၈ ) ထိ
၁။ လွှတ်တော် (Parliament) သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုအာဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယနေ့ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် လည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၏ သုတေသနအစီရင်ခံစာ စာတမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး တွင် မေးခွန်းမေးမြန်းမှု၊ အဆိုတင်သွင်းမှုနှင့် ဥပဒေပြုမှုအခြေအနေများကို နေ့စဉ်သုတေသန ပြု၍ လေ့လာထားပါသည်။
၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အဆင့်ဆင့်များအား သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် မေးခွန်းမေးမြန်းမှု၊ အဆိုတင်သွင်းမှုနှင့် ဥပဒေပြုမှုတို့ကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ တိုင်းတာနိုင်မည့် အကျိုးရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်စပ်လျဉ်း သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေမှီငြမ်းနိုင်ရန်အတွက် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ရည်ညွှန်းကိန်းများကို သုတေသနစာတမ်းတိုအဖြစ် ပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းတင်သွင်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြနှုတ်ဖြေမေးခွန်းများကိုလေ့လာခြင်း
၃။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ထိ (၁၆) ရက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းပေါင်း (၈၈) ခု မေးမြန်းခဲ့သည့်အတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင်မေးခွန်း (၆)ခု မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ထိ (၃၃) ရက် (အစုအဖွဲ့၁ရက်ပါ) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းပေါင်း (၁၉၁) ခု မေးမြန်းခဲ့သည့်အတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင်မေးခွန်း (၆) ခု မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြနှုတ်ဖြေမေးခွန်းများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ
၅။ “ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး” တို့တွင် ကြယ်ပွင့်ပြနှုတ်ဖြေမေးခွန်း များအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများတွင် မေးခွန်းရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားများ၏ ကျား-မ အလိုက် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံရေးပါတီကိုလေ့လာခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုဒေသကိုလေ့လာခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအရေအတွက် လေ့လာခြင်းများကို သုတေသန ပြုလုပ်၍ လေ့လာထားပါသည်။
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
၆။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေပြဇယား -
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့သည့် “ကျား/မ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ” စာရင်း
၇။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့သည့် “ကျား/မ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ”စာရင်းများအား နှိုင်းယှဉ်ပြဇယား-
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်း ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ
၈။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများမေးမြန်းခဲ့သည့် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် (၁၂) ဦးမှ မေးခွန်း(၁၇) ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်-
၉။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများမေးမြန်းခဲ့သည့် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ် (၁၉) ဦးမှ မေးခွန်း(၂၉)ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် လေ့လာတွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်-
၁၀။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း မေးမြန်းခဲ့ သည့် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်နှင့် မေးခွန်းပမာဏတို့သည် ပိုမိုများပြားလာသည်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့ သည့် အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ
၁၁။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများမေးမြန်းခဲ့သည့် အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ် (၅၁) ဦး မှ မေးခွန်း (၇၁) ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်-
၁၂။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများမေးမြန်းခဲ့သည့် အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ် (၉၁) ဦး မှ မေးခွန်း (၁၆၂) ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကိုအောက်ပါဇယားတွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်-